Dagaal Khasaare xoogan geystay oo maanta ka dhacay Gobolka Baay – Hornafrik Media Network
Dagaal Khasaare xoogan geystay oo maanta ka dhacay Gobolka Baay
By HornAfrik	 On Jan 29, 2018
Dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa duhurnimadii maanta waxa uu ka dhacay Gobolka Baay gaar ahaan wadada xiriirisa degmooyinka Buurhakaba iyo Baydhabo oo ka tirsan Gobolkaasi.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Ciidamo isugu jira kuwa Dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo Taliye urur ku galbinayay Saddex Gaari oo nuuca dagaalka ah ay wadada u galeen xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab, sidaasina uu dagaal culus ku dhexmaray labada dhinac.
Ciidanka Millitariga iyo kuwa Koonfur Galbeed ee galbinayay Taliye ururka ayaa ka dhaqaaqay degmada Buurhakaba waxayna ku sii jeedeen degaanka Deynuunay, balse markii ay marayeen degaanada Mooda-mooda iyo Luho-ware ayay mar qura weerar dhabagal ah kala kulmeen xoogaga Shabaab.
Dhinacyadan ayaa halkaasi waxaa ku dhexmaray dagaal socday daqiiqado badan, kaasi oo sababay inuu ka dhasho khasaare kala duwan oo dhinacyadan soo kala gaaray, sida ay inoo sheegeen dadka degaanka.
Maamulka degmada Buur-hakaba oo aan la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalkan dhankooda looga dilay Taliyihii Ciidanka degmada Buurhakaba Korneel C/raxmaan Cismaan Abroone iyo laba ka mid ah ilaaladiisa, waxay kaloo sheegeen Shabaab dhankooda in laga dilay Afar Dagaalame.
Website-yada Shabaab ayaa lagu baahiyay in dagaalkaas ay xoogaga Shabaab ku dileen Taliyihii Ciidanka degmada Buurhakaba Korneel C/raxmaan Cismaan Abroone iyo Saddex ka mid ah ilaaladiisa, sidoo kalena uu dirqi ku baxsaday Gaari Cabdi Bille ah oo ay wateen Ciidanka Koonfur Galbeed.
Waxaa wadada isku xirta Baydhabo iyo Buurhakaba isku dhaafay Meydka Marxuum Abroone oo Baydhabo loo soo qaaday iyo Ciidamo gurmad ah oo ka baxay magaalada Baydhabo, kuwaasi oo ku baxay goobta uu weerarka ka dhacay.
Weli waxaa muuqata in Madaxda Maamaulka Koonfur Galbeed ay qorshe la’aan ka yihiin in ay xal u helaan weerarada sii kordhaya ee ka dhacaya wadooyinka qaar ee degaanada Maamulkaasi, kuwaasi oo ay geysanayaan ururka Al-shabaab, inkastoo ay Koonfur Galbeed ay marwalba sheegto in ay howlgallo ka socdaan degaanada Maamulka, kuwaasi oo ilaa hadda aanay muuqan natiijooyinka laga soo hooyiyay.
Akhriso:-Baarlamaanka Jubbaland Oo Xasaanadii Kala Noqday Mid Ka Mid Ah Xildhibaanada
Dowladda Kenya oo damisay TV-yada Citizen iyo NTV